6061 एल्यूमिनियम 3in एक्स 5in Rosin प्लेट हीटर नियन्त्रक भारी ड्युटी Rosin प्रेस किरा दोहरी नियन्त्रक क्यासेट हीटर सेट - चीन Dongguan आमोन हार्डवेयर
हाइड्रोलिक Rosin प्रेस
वायवीय Rosin प्रेस
बिजुली Rosin प्रेस
Vape पेन / कारतूस
L0 Vape कलम
6061 एल्यूमिनियम 3in एक्स 5in Rosin प्लेट हीटर नियन्त्रक भारी ड्युटी Rosin प्रेस किरा दोहरी नियन्त्रक क्यासेट हीटर सेट
Rosin थिचेर संग सबै भन्दा ठूलो समस्या उपकरण लागत छ। एक बाल straightener प्रयोग राल को सानो मात्रा बाहिर squeeze आफ्नो इच्छुक नगरेसम्म, आफ्नो केही रुपैया खर्च गर्न जाँदैछन्। म ठूलो मिसिन को धेरै डलर हजारौं जाने देखेको छ, तर आफ्नो व्यवसाय चलिरहेको नभएसम्म धेरै wouldn`t अर्थमा बनाउन खर्च गरेका छन्।
आफ्नो ठूलो उपज मा केही राम्रो rosin उत्पादन रुचि हो भने आफ्नो दुई कुराहरू आवश्यक जा:
Rosin थिच्दा, कम गर्मी उच्च दबाबको मा, तपाईंले लगभग चिसो प्रेस rosin अर्थ, तपाईं सही उपकरण छ भने आवश्यक छ। तर, यहाँ लिपि गर्न छडी गर्न अनुमति दिन्छ। I`m तपाईं देखाउन बारेमा तपाईं $ 500 भन्दा कम लागि आफ्नो DIY Rosin प्रेस बनाउन सक्छ कसरी.
Thats सही, एक प्रेस सबैभन्दा पैदावार लागि तापमान नियन्त्रण बाहिर पकवान गर्न सक्ने दबाव को 12,000lb! सबै को सबै भन्दा राम्रो, यो केवल सेट अप गर्न र प्रयोग मिनेट को एक जोडी लाग्छ।
Let`s थिचेर Rosin भांग देखि सबै रस बाहिर squeeze गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो, यो सामना। को जडिबुटी (बिरूवा कुरा) बाट राल निकाल्न गर्मी र दबाव प्रयोग गरेर, जो कोहीले केही उच्च गुणवत्ता राल उपज गर्न सक्नुहुन्छ।
Rosin थिचेर संग सबै भन्दा ठूलो समस्या उपकरण लागत छ। को सानो मात्रा बाहिर squeeze आफ्नो इच्छुक जबसम्म एक बाल straightener प्रयोग राल , तपाईंको केही रुपैया खर्च गर्न जाँदैछन्। म ठूलो मिसिन को धेरै डलर हजारौं जाने देखेको छ, तर आफ्नो व्यवसाय चलिरहेको नभएसम्म धेरै wouldn`t अर्थमा बनाउन खर्च गरेका छन्।
उच्च दबाव - कम से कम 500lb 1,000lb गर्न (2+ टन मनपरेको)
गर्मी - 150 ° फा गर्न 350 ° फा (200 ° फा रुचि)
Rosin थिच्दा, कम गर्मी उच्च दबाबको मा, तपाईंले लगभग चिसो प्रेस rosin अर्थ, तपाईं सही उपकरण छ भने आवश्यक छ। तर, यहाँ लिपि गर्न छडी गर्न अनुमति दिन्छ। I`m तपाईं देखाउन बारेमा how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
DIY Rosin रिग
यो योजना तपाईंलाई आवश्यक सबै दुई सरल उत्पादनहरु छ निर्माण गर्न:
डबल Rosin प्रेस प्लेट किट भारी वायर्ड ताप रड संग ड्युटी दोहोरो नियन्त्रक बक्स
6-टन प्रेस प्लेट र एच फ्रेम संग हाइड्रोलिक पसल तल्ला प्रेस
तपाईंको अहिलेसम्म पूरा आघात मा, दुवै को लागि विवरण भन्दा जाने अनुमति दिन्छ भने। पनि सबै भन्दा राम्रो विधि लागि पूर्व थिचेर rosin कुकीहरू उच्च लागि terpenoid पैदावार।
यो हाइड्रोलिक प्रेस
एक शक्तिशाली छ टन प्रेस एक ठोस एच-फ्रेम मा रखे। सुपर बलियो र सरल निर्माण सेट गर्न सजिलो thats। छेउमा रेल कि तपाईं काम ठाउँ समायोजन गर्न अनुमति प्वालहरू छन्। यो पनि समावेश2प्रेस प्लेट, तिनीहरूलाई प्रयोग! तिनीहरूले आफ्नो ताप प्लेट रक्षा हुनेछ। 60lb को कुल वजन संग, तपाईं सुरक्षित बाहिर सनकी गर्न सक्नुहुन्छ दबाव को6टन, तपाईंलाई आवश्यक भन्दा तरिका अधिक।
गर्मी नियन्त्रित प्रेस प्लेट
मिनेट !, यी भारी कर्तव्य प्लेट कि पर्याप्त गर्मी थप उत्पन्न र 8000psi सम्म सामना गर्न सक्छन् मा गर्न 415 ° फा फा 0। सबै को सबै भन्दा राम्रो, को प्लेट एक इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण बक्स सही तापमान गर्न गरम छन्! तपाईं प्लेट उम्लिरहेको, वा केही अन्य प्रेस जस्तै एक झटका टर्च प्रयोग गरि वरिपरि JERK छ don`t।
के तपाईं कहिल्यै rosin अघि थिचिएको छ भने, तपाईं के को एक राम्रो विचार र कसरी सजिलो प्रयोग गर्न छ हुनुपर्छ। तपाईंको आफ्नै प्रेस निर्माण तपाईं नगद एक टन बचत र डबल मूल्य हो कि अन्य प्रेस भन्दा राम्रो छैन भने राम्रो तरिकाले काम गर्नेछ।
1.Plug र प्ले5"x3" platen सेट अप। हामी कुनै हट स्पट कारण, यो, प्रकाश बलियो छ, र उत्कृष्ट गर्मी स्थानान्तरण छ किनभने 6061 एल्यूमीनियम प्रयोग!
2.Dual गरम प्लेट, दुवै एक गर्मी zone.This साझेदारी उदाहरणहरू सयौं उत्कृष्ट परिणाम संग एक, प्रयास परीक्षण र सिद्ध डिजाइन छ। हामी दोहरी नियन्त्रक कुनै राम्रो उपज वा गुणवत्ता संग, दुवै विस्तार परीक्षण गर्नुभएको छ।
आराम 0-300F देखि 3.Fully सही तापमान अनुगमन। सीधा प्लेट मा हाम्रो गर्मी सेन्सर अभ्यास, तपाईं सही साँचो platen तापमान दिने।
2 "व्यास वा कम राम संग 20 टन कुनै पनि हाइड्रोलिक प्रेस फिट गर्न 5.Made।
विकल्प को आफ्नो प्रेस हाम्रो प्लेट माउन्ट रूपमा राम मा दुई सेट स्क्रू कस (समावेश हेक्स कुञ्जी) को रूपमा सरल छ। सेटअप5मिनेट भन्दा कम लाग्छ!
हाम्रो शक्तिशाली 500w क्यासेट ताप तत्व संग 10 भन्दा कम मिनेटमा आफ्नो वांछित तापमान 6.Reach।
7.The प्लेट प्रयोग को पहिलो केही घण्टा भित्र आफूलाई भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ!
यो किरा समावेश:
2pcs 6061 एल्यूमिनियम ब्लक
डिजिटल नियन्त्रक दुई 500w क्यासेट ताप तत्व गर्न तार
विकल्प को आफ्नो प्रेस आफ्नो प्लेट माउन्ट हेक्स कुञ्जी
तपाईंको इलेक्ट्रनिक्स मा एक वर्ष पूरा वारेन्टी
ठेगाना: वेयरहाउस, लस एन्जलस वेयरहाउस, + 3731B सान गब्रिएल नदी पार्क तरिका, Pico Rivera, संविधानसभा 90660, संयुक्त राज्य अमेरिका
6061 एल्यूमिनियम 3in एक्स 5in Rosin प्लेट सेट गर्नुहोस् ...